Su’aalaha xog qaadista is qiimaynta COVID-19 - Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Su’aalaha xog qaadista is qiimaynta COVID-19
Dhammaan ka qayb galayaasha dhegaysiga sii xaadiraya dhegaysiga qof ahaan dhismayaasha Socdaalka iyo Guddida Qaxootiga. waa inaad buuxisaa su’aalaha xog qaadista is qiimaynta:
14 maalmood ka hor dhegaysigaaga, iyo
Haddii adiga ama qof aad la Mayaoshahay uu muujiya wax ka mid ah astaamaha su’aasha 4 wakhti kasta oo ah gudaha 14 maalmood ee dhegaysiga ah.
Miyaa dhakhtarka, adeeg bixiyaha ama qaybta caafimaadka dad waynahu kuu sheegeen inaad is karantiimayso (joogida guriga) maanta?
Miyaa lagaa helay COVID-19 14 maalmood ee u dambaysay?
Ma waxaad sugaysaa natiijooyinka baadhitaanka COVID-19?
Miyaad adiga ama qof aad la Mayaoshahay oo kasta weligii la kulmay wax ka mid ah astaamaha soo socda 14 maalmood ee u dambeeyay?
Duuf sanka ka socda, hindhiso ama cabudh sanka ah
(iyaddoo ay ka maqan tahay asbaabaha dahsoon ee astaamaha sida xasaasiyadaha xiliga ah iyo duuf badan oo sanka ah)
Ur cusub ama dhadhan cudur ah
Yalaalugo.matag, shuban, xanuun caloosha ah
Daal aan la garanayn jiro
Miyaad dalka dibada uga safartay ama xidhiidh dhow la lahayd qof kasta kaas oo safray 14 maalmood ee la soo dhaafay?
Miyaad xumad leedahay?
Miyaad xidhiidh dhow la lahayd qof qaba jirada neefsashada ama mid la xaqiijiyay ama xaalad suuragal ah oo COVID-19 14 maalmood ee la soo dhaafay?
Miyaad xidhatay mida loo baahan yahay iyo/ama qalabka ilaalinta gaarka ah ee lagu taliyay sida waafaqsan Mayaoca waajibaadyada aad qabanaysay (tusaale, muraayadaha badbaadada indhaha, galoofyada, maaskareetiga iyo shuluga ama N95 wadata buufinta dhalinaysa nidaamyada caafimaadka (aerosol generating medical procedures, AGMPs) marka aad taabasho dhow la lahayd mid laga shakiyay ama xaalad la xaqiijiyay oo COVID-19.
Haddii aad ku jawaabtay “Haa” su’aal kasta laga bilaabo1 ilaa 6, ha tegin IRB. La xidhiidh DWaaxda​ isla markaaba. Waxaanu kuu soo diri doonaa dhegaysigaaga in lagu qaban karo onlayn ahaan isku taariikh iyo wakhti. Haddii kale, dib ayaanu wakhti ugu qaban doonaa dhegaysiga.
Haddii aad ku jawaabtay “Haa” su’aasha 7 iyo “Maya” su’aasha 8, ha tegin IRB. La xidhiidh DWaaxda isla markaaba. Waxaanu kuu soo diri doonaa dhegaysigaaga in lagu qaban karo onlayn ahaan isku taariikh iyo wakhti. Haddii kale, dib ayaanu wakhti ugu qaban doonaa dhegaysiga.